Ifowuni ye-KFC eyenziwe nguHuawei engayi kukushiya ungenamdla | Iindaba zeGajethi
Ifowuni ye-KFC eyenziwe nguHuawei engayi kukushiya ungakhathali
Imakethi yokunxibelelana ngomnxeba iya isanda ngokukhethekileyo, ngokuqinisekileyo. Sifumene inani elikhulu leefowuni ezinikezelwe kwixesha elikhethekileyo okanye abantu abadumileyo, umzekelo inokuba lupapasho olukhethekileyo lwe-Samsung Galaxy S7 yeeOlimpiki, okanye olunye uhlelo olukhethekileyo olunikezelwe kubalinganiswa abavela kwiimpawu zeMarvel. Into ongenakuze uyicinge yifowuni ephathekayo yetyathanga lokutya okukhawulezayo.
IHuawei yenze iselfowuni ye-KFC kwaye ayizukubuza ukuba uyafuna na ukuba uphawule nge-odolo yakho. Siza kwazi ngokunzulu ngakumbi ukuba yintoni ekhokele iHuawei ukuba yenze isixhobo esiphathwayo ezandleni zefranchise yokutya okukhawulezayo kwaye yeyiphi i-hardware efihle ngaphakathi.
Asidlali, le fowuni ikhona e-China kwaye ungayithenga. Isungulwe kumsitho weminyaka engamashumi amathathu yokufika kweKFC kwisigebenga saseAsia ngo-1987. (720p). I-chassis iya kwakhiwa nge-aluminium ebomvu kwaye umphambili uya kuba mnyama, into efana ne-iPhone 7 RED.
Ukuyihambisa kuya kuba phakathi-phakathi kweQualcomm Snapdragon 425 ehamba ne-3GB ye-RAM. Ukugcina siya kuba ne-32GB yokugcina. Okwangoku, ibhetri iya kusinika i-3.020 mAh. Ingxaki kukuba akuyi kuba lula ukuyifumana, IHuawei iza kuphehlelela kuphela iiyunithi ezingama-5.000 kwintengiso, eza kuza nesicelo somculo esiza kukuvumela ukuba udlale umculo owuthandayo kwizithethi zeendawo zokutyela zeKFC e China. Ixabiso layo li-140 euros yokutshintsha, ngexabiso eliphantsi, kodwa ukuthengiswa kwayo kuthintelwe kwilizwe lase-Asiya, ayizukufikelela kurhwebo ngaphandle kwemida yayo, ngaphandle kwabathile abazimiseleyo ukuhlawula oko bakucelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ifowuni ye-KFC eyenziwe nguHuawei engayi kukushiya ungakhathali
Izinto ezizodwa ezenziwa ziimpawu ezithile zinokuba ngumdla omkhulu kubaqokeleli okanye kwabo bafuna ukuba neyunithi ye-5000 ekhethekileyo kwaye incinci kakhulu.
Ezi zezona "laptops" zibalaseleyo kwintengiso